Ukunkonxa iziqhamo, imifuno kunye nezinye iintlobo zokutya ezifana ne ntlanzi, nokutya okulungele ukutyiwa ziquka uvaleka ngci kokutya, inkonxa yokutya ibekwa emlilweni. Xa kusenziwa elinyathelo, iintsholongwane ezenza izifo ziyatshabalaliswa kwaye imveliso ayitshintshi. Ukunkonxa kwenza imveliso ihlale ixesha elide, ngapha kwexesha lonyaka efumaneka okanye eveliswa ngalo.
Nangona igama ‘ukunkonxa’ lijoliswe kwitoti zenkcenkce, lendlela ijolise nase kusetyenzisweni kwebhotile ze glasi, ipawutshi ezogqunyiweyo, itreyi ze plastiki kunye nezitya.
Ngalo maxesha kwakuthatha iiyure ezintlanu ukucoca imveliso neyayifakwa kwiibhotile zegilasi, ze zivalwe zingaqiniswa, zandule ukufakwa emanzini ashushu. Ezi bhotile zazivalwa mba ngeziciko ezibizwa nge corks kunye nentlama yekhandlela....more
uShishino Loku Nkonkxa Lwase Mzantsi Afrika
Umbutho we The South African Fruit and Vegetable Canners Association wasekwa ngo Januwari ka 1954. Lo mbutho unamalungu angama 20 namele ushishino lwe ziqhamo, amapayna, imifuno kunye noshishino lwe tamati....more